Indomethacin-ka ugu weyn Api, Amoxicillin Trihydrate - Tecsun
APIS EE ISTICMAALKA AADANAHA
NSP Enzyme & enzymes badan
Qaar kale APIs
waxaan dhisnay koox heer sare ah, oo xirfad iyo khibrad u leh mashiinka.
TECSUN PHARMA LIMITED waa shirkad saamile wadaag ah oo la aasaasay 2005.
Baaxadda ganacsiga ee TECSUN hadda waxay ku lug leedahay soo saarista, soo saarista iyo suuqgeynta API, dawooyinka dadka iyo xoolaha, wax soo saarka dhammaaday ee daawooyinka xoolaha, waxyaabaha lagu daro cuntada iyo Amino Acid. Shirkaddu waa shuraako labo wershadood oo GMP ah sidoo kale waxay xiriir wanaagsan la yeelatay in ka badan 50 warshadood oo GMP ah, waxayna si isdaba joog ah u fulineysaa ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 si loo wanaajiyo loona xoojiyo nidaamka maamulka iyo nidaamka hubinta tayada.
Shaybaarka dhexe ee TECSUN waxaa asal ahaan aasaasay oo aasaasay seddex jaamacadood oo kale oo caan ah oo ka baxsan TECSUN lafteeda, waa jaamacadaha Hebei, Hebei University of Technology, Hebei GongShang University.
Faytamiin C, sidoo kale loo yaqaan ascorbic acid, waa nafaqo muhiim u ah biyaha-milma. Dad iyo qaar o ...
Strides waxay heshay USFDA appr ...
Strides Pharma Science Limited (Strides) ayaa maanta ku dhawaaqday inay hoos u dhigis gebi ahaanba ay wadaageyso ...
Faytamiin B12 symp yaraanta ...
Faytamiin B12 yaraanta ayaa dhici karta haddii qofku uusan ku filnayn fiitamiin-ka cuntada, a ...
Rm 1413, Bldg A, Jinyuan Commercial Plaza, Maya. 152 Wadada Bariga Huaian, Yuhudistrict, Shijiazhuang 050031 Shiinaha
Alaabada Featured - Hot Tags - Sitemap.xml - AMP Mobile